Ho an’ny laharam-pahamehana dimy : 600 tapitrisa dolara fanampiny avy amin’ny BAD | NewsMada
Ho an’ny laharam-pahamehana dimy : 600 tapitrisa dolara fanampiny avy amin’ny BAD
Par Taratra sur 05/09/2016
Nandalo teto amintsika, ny herinandro lasa teo, ny flohan’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad), Akinwumi Adesina. Nisy fiaraha-midinika natao momba ny toekarena eto an-toerana tamin’ny filoha, Rajaonarimampianina Hery, sy ny minisitry ny Fitantananm-bola, Rakotoarimanana Gervais. Nofaritan’ny filohan’ny Bad tamin’izany ireo laharam-pahamehana dimy aty Afrika.
Vonona ny Bad hanampy an’i Madagasikara, noho ny fahitan’ity Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana ity fa misy ny ezaka ataon’ny governemanta malagasy. Noho izany, hanome famatsiam-bola fanampiny 600 tapitrisa dolara ny Bad ho an’ny efa-taona ho avy. Famatsiam-bola tokony hifanaraka amin’ireo laharam-pahamehana dimy nofaritany ho an’i Afrika : famokarana sy famatsiana angovo, famatsiana ara-tsakafo, fananganana indostria, fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina. “Manana harena betsaka ianareo tokony hotrandrahina hahatrarana izany”, hoy ny filohan’ny Bad, Akinwumi Adesina.
Efa nisy ny fandalovan’ny mpitantana iray, Soraya Mellali, ny volana janoary 2016. Nohamafisina ny hanampiana an’i Madagasikara hanafaingana ny fampandrosoana. « Miankina amin’ny tomban’ezaka tsy maintsy atao anefa izao fandraisana andraikitra izao, araka ny tetikasa napetraka. Raha tonga eto ny filohan’ny Bad, efa manana ny heviny izy. Nisy mihitsy aza ny fifanakalozan-kevitra nataony tany anivon’ireo tantsaha. Izay ny anton’ io 600 tapitrisa dolara io », hoy mpitantana iray ao amin’ny Bad misahana an’i Madagasikara.
Nisy koa ny fitsidihana ireo tetikasa novatsin’ny Bad, toy ny any Tanandava, distrikan’i Morombe, misy ny tohodranon’i Bevoay. Mbola betsaka ny tinady eo amin’ny fambolena (famatsian-drano, milina, masomboly, fahazoana tany), fa zava-dehibe iray koa ny hanampiana ny tantsaha amin’ny fanamboaran-dalana ho fanamoràna ny famoaham-bokatra. Mitaky asa mivaingana daholo ireo ary tsy maintsy hanaovan’ny mpamatsy vola tomban’ezaka.
Famatsiam-bola ho an’ny vehivavy
Nampahafantarina koa ny fisokafan’ny tetikasa iray eto Madagasikara : Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), atao hanampiana indrindra ny vehivavy hahazo famatsiam-bola. 3 hatramin’ny 4 miliara dolara izany AFAWA izany ho an’i Afrika manontolo mandritra ny 4 taona ho avy ; ny famatsiam-bola hafa avy amin’ny Fonds africain de développement (Fad). Matoky an’i Madagasikara izany izao ny Bad. Izay fahatokisana izay mitaky asa mivaingana, hita mipaka any amin’ny vahoaka, araka ny laharam-pahamehana iray : ho fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina.